Yekumhanyisa Press Press Vagadziri & Vatengesi - China Yekumhanyisa Press Press Factory
DAYA yakatwasuka divi mbiri crank punch yekutsikisa VS Imwe yakatwasuka divi mbiri crank yekudhinda Daya yekudhinda Daya yekudhinda: ine chikuva uye chengetedzo fenzi, iri nyore yekunamatira batira uye shanduko yekutonhora mafuta, main mota bhandi rakasununguka uye nyore kugadzirisa, uye zviri nyore kune zvinotevera kugadzirisa . Yakachengeteka uye iri nyore. Mumwe muchina wekudhinda Mimwe yekudhinda: Pasina yekugadzirisa chikuva. Clutch yekugadzirisa, kutsiva kwemafuta anotonhorera, kusununguka kugadziridzwa kweiyo huru mota bhandi, nezvimwewo whi ...
Maitiro ekuita 1. Furemu yacho yakaitwa nesimbi yakasimba. Mushure mekununurwa mukati mekunetsekana, zvinhu zvacho zvakagadzikana uye iko kunatsurika kunoramba kuchichinja, iko kwakanyanya kukodzera kugadzirwa kwekutsika-tsikwa; 2. Double gwara njanji njanji, imwe yepakati mbiru chimiro, uchishandisa zero kukanganisa bhora rinotakura kutsiva echinyakare kutsvedza dhizaini dhizaini, kuitira kuti kudzikisira kusimba kukwesana kune kushoma, uye kushandira pamwe nekumanikidzwa girisi kudzikisira iyo yekushisa deformation uye kuzadzisa ...